"Kaivalyam" 1 BR in Heritage Town - I-Airbnb
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Prithika
ISAZISO ESIPHATHELENE NE-COVID:
1. Ukuthuthwa kwendle nokuhlanza njengokusho kwephrothokholi ye-Airbnb ngaphambi kokungena ngakunye.
2. I-E-pass okwamanje ayifuni ukungena ePondy.
3. Abasebenzi bagqoka imaski lapho bexoxa nezivakashi. Izivakashi ziyacelwa ukuthi zenze okufanayo lapho zisebenzelana nabasebenzi nalapho ziphumela ngaphandle.
4. Indawo yokuhlala ephephile njengoba ingekho i-AC emaphakathi
5. Isaphulelo sika-10% esizenzakalelayo sokuhlala ubusuku obungu-2.
Jabulela ukuhlala okunethezekile efulethini eliwine imiklomelo, amamitha ayi-100 nje ukusuka e-White Town futhi enkabeni yedolobha lamagugu. Igumbi lakho lisesitezi sesi-5 (izinga lethala) futhi ukuphela kwegumbi kulesi sitezi, eliqinisekisa ubumfihlo bakho. Ingaphakathi lizolile futhi lijabule, likumema ukuthi uphumule futhi ucwilise e-Pondicherry ngejubane lakho. Lolu hlu olweyunithi yokulala eyi-1 enendlu yokugezela enamathiselwe yangasese (alikho ikhishi/indawo yokupheka). Izindawo zokudlela ezihamba phambili zedolobha namakhefi zingaphansi kohambo lwamaminithi angu-10.
Kule yunithi ye-penthouse, ungafinyelela ekamelweni elincane elithokomele elivuleka liqonde ethafeni elihle elinotshani obuncane obuhle. Uma uvuka ekuseni, qiniseka ukuthi uphumela ethafeni ukuze ubone ukuphuma kwelanga okumangalisayo.
4.61 out of 5 stars from 172 reviews
4.61 · 172 okushiwo abanye
Uyi-100m ukusuka e-White Town, u-500m usuka e-Aurobindo Ashram kanye no-600m usuka e-Rock Beach. Itholakala enkabeni yezifunda zokuthenga iMission Street kanye noNehru Street, leli fulethi liyintokozo yanoma yimuphi umthengi. Izindawo zokudlela ezihamba phambili namakhefi e-Pondicherry zingaphansi kohambo lwemizuzu eyi-10. Isiteshi sikaloliwe sasePondicherry nesitobhi samabhasi kukude ngamakhilomitha angu-2. I-Nilgris kanye ne-Vijay Ganapathy, izitolo ezinkulu ezithengwa kakhulu e-Pondy, ziqhele ngamamitha angu-400.
Nakuba sihlala ePondicherry, sihamba njalo. Uma sise-Pondicherry ngesikhathi uhlala, sizoqiniseka ukuthi sikusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo. Uma singekho, ozakwethu bazoxhumana nawe ngaso sonke isikhathi futhi ungasishayela noma nini, futhi sizokwenza amalungiselelo okwenza ukuhlala kwakho kukhululeke futhi kuthokomele ngangokunokwenzeka.
Nakuba sihlala ePondicherry, sihamba njalo. Uma sise-Pondicherry ngesikhathi uhlala, sizoqiniseka ukuthi sikusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo. Uma singekho, ozakwethu…
Hlola ezinye izinketho ezise- Puducherry namaphethelo